Low Spread Forex ပွဲစား - အကောင်းဆုံး Forex Trading သည်ပြန့်ပွားပွဲစားများ
ပင်မစာမျက်နှာ / အကြောင်းအရာ / အဘယ်ကြောင့် FXCC / န့်
ကျနော်တို့ကိုသုံးနိုင်သည်တစ်ခုမှာရိုးရှင်းတဲ့နည်းလမ်းသည် Forex ဈေးကွက်ထဲမှာန့်များ၏ concept ကိုသိနားလည်ရန်စတင်နိုင်ရန်အတွက်, ကျွန်တော်တစ်ဦးဗျူရိုက de ပြောင်းလဲမှုမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလပ်ရက်ငွေကြေးပြောင်းလဲသွားသည့်အခါအချိန်ကာလထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ဖြစ်ပါသည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်အားလပ်ရက်ပိုက်ဆံဘို့ငါတို့ပြည်တွင်းငွေကြေးလဲလှယ်နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင် ဖြစ်. , ယန်းယူရို, ယူရိုယူရိုဒေါ်လာ POUNDS ။ အဆိုပါဗျူရိုက de ပြောင်းလဲမှုအပေါ်ပြတင်းပေါက်မှာတော့သို့မဟုတ်ယင်း၏အီလက်ထရောနစ်ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်ကျနော်တို့နှစ်ဦးကိုမတူညီတဲ့ဈေးနှုန်းများမြင်ရပါလိမ့်မည်, ထိုဗျူရိုထိရောက်စွာဖျောလျက်ရှိ၏ "ကျနော်တို့ကဒီစျေးနှုန်းမှာဝယ်ကြှနျုပျတို့သညျဤစျေးနှုန်းမှာရောင်းချ။ " တစ်ဦးကမြန်မြန်ဆန်ဆန်တွက်ချက်မှုအဲဒီမှာတန်ဖိုးများနှင့်စျေးနှုန်းများကိုတစ်ဦးကွာဟမှုရှိကြောင်းထုတ်ဖော်ပြသ; ပြန့်ပွားခြင်းသို့မဟုတ်ကော်မရှင်။ ဒါကဖြစ်ကောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝအသက်တာ၌မြင်သောတစ်ဦး Forex ပြန့်ပွား၏အရိုးရှင်းဆုံးဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။
a "ကိုပြန့်နှံ့" ဟုလုံခြုံရေးရောင်းဝယ်ခြင်းစျေးနှုန်းအကြားကွာခြားချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ၏ရိုးရှင်းချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ် ဒါဟာအစအရောင်းအဝယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတာ၏ကုန်ကျစရိတ်တစ်ဦးအဖြစ်မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ Forex စျေးကွက်များတွင်ပြန့်ပွားမဆိုအထူးသဖြင့်ငွေကြေးတစ်စုံများအတွက်ကမ်းလှမ်းမှုအပေါ်အမျိုးမျိုးဝယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းစျေးနှုန်းများအကြားကွာခြားချက်အဖြစ်ဖော်ပြနိုင်ပါသည်။ မည်သည့်ကုန်သွယ်မှုတကယ်အမြတ်အစွန်းဖြစ်လာမီ, Forex ကုန်သည်များပထမဦးဆုံးအလိုအလျောက်အကျိုးဆောင်များကနုတ်ပြန့်ပွား၏ကုန်ကျစရိတ်များအတွက်အကောင့်ရပါမည်။ တစ်ဦးကနိမ့်ပျံ့နှံ့သဘာဝကျကျအောင်မြင်သောအရောင်းအစောပိုငျးကအမြတ်အစွန်းပိုင်နက်သို့ရွှေ့မည်ကြောင်းသေချာ။
အဆိုပါ Forex စျေးကွက်များတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနေဆဲအခြားသာရှိပြီးပြည်ပမှတဦးတည်းငွေကြေးအရောင်းအဝယ်ဖြစ်နောက်ထပ်ဘို့တငွေကြေးဖလှယ်နေကြပါတယ်။ ကုန်သည်ကြီးများကရြောကျသို့မဟုတ်ထမြောက်ကြလိမ့်မည်ကြောင်းလောင်းကစား, အခြားငွေကြေးနှိုင်းယှဉ်တစ်ဦးအနေအထားယူတဲ့အချို့သောငွေကြေးသုံးပါ။ ထို့ကြောင့်, ငွေကြေးအခြားငွေကြေးရှိသူတို့၏စျေးနှုန်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကိုးကားထားပါသည်။
အလွယ်တကူဤအချက်အလက်ဖော်ပြနိုင်ဖို့အတွက်ငွေကြေးအမြဲဥပမာ EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာအဘို့, အားလုံးအတွက်ကိုးကားထားပါသည်။ ပထမဦးဆုံးငွေကြေးခြေရင်းငွေကြေးဟုခေါ်သည်နှင့်ဒုတိယငွေကြေးကောင်တာကိုခေါ်, ဒါမှမဟုတ်ကိုးကားငွေကြေး (အခြေစိုက်စခန်း / quote) ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ€ 1.07500 ဝယ်ဖို့ $ 1 ယူလျှင်ဥပမာ, ဟူသောအသုံးအနှုနျး EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.075 / 1 တူညီပေသည်။ အဆိုပါ EUR (ယူရို) ကိုအခြေခံငွေကြေးပါလိမ့်မယ်နှင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ (ဒေါ်လာ) ကိုကိုးကားဒါမှမဟုတ်တန်ပြန်ငွေကြေးပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့်ယခုပြန့်ပွားတွက်ချက်ပုံကိုကြည့်ကြကုန်အံ့, ထိုဈေး၌ငွေကြေးကိုးကားဖို့အသုံးပြုတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့, တစ်လောကလုံး, နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ Forex ကိုးကားအမြဲပေး "လေလံနဲ့မေးပါ" စျေးနှုန်းများသို့မဟုတ် "ဝယ်ရောင်း" ဒီသူတို့သည်အစဉ် equity ဝယ်သို့မဟုတ်ရောင်းမယ်ဆိုရင်အများကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်အတူအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်လတံ့သောအရာကိုဆင်တူသည်နေကြသည်; ရှယ်ယာရောင်းဖို့တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောစျေးနှုန်းလည်းမရှိနှင့်ရှယ်ယာကိုဝယ်ခြင်းငှါခြားနားသောစျေးနှုန်းလည်းမရှိ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဒီသေးငယ်တဲ့ပြန့်ပွားသည့်ပွဲစားရဲ့အရောင်းအဝယ်အပေါ်အမြတ်အစွန်း, သို့မဟုတ်ကော်မရှင်ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါလေလံအကျိုးဆောင်ကောင်တာငွေကြေးကိုဒေါ်လာလဲလှယ်အတွက်အခြေစိုက်စခန်းငွေကြေး (ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပမာထဲမှာယူရိုငွေ) ကိုဝယ်ခြင်းငှါဆန္ဒရှိသောအရာမှာစျေးနှုန်းကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ ပြောင်းပြန်စျေးနှုန်းပွဲစားကောင်တာငွေကြေးလဲလှယ်အတွက်အခြေစိုက်စခန်းငွေကြေးရောင်းဖို့ဆန္ဒရှိသောအရာမှာစျေးနှုန်းဖြစ်ပါသည်မေးကြည့်ပါ။ Forex စျေးနှုန်းများယေဘုယျအားဖြင့်ငါးနံပါတ်များကို အသုံးပြု. ကိုးကားထားပါသည်။ ဒီတော့ဥပမာ, ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာ 1.07321 တစ် EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာလေလံစျေးနှုန်းခဲ့ဆိုကြပါစို့နှင့် 1.07335 ၏စျေးနှုန်းကိုမမေး, ပြန့်ပွား 1.4 ပါလိမ့်မယ်။
စစ်မှန်တဲ့စျေးကွက်စျေးနှုန်းနှိုင်းယှဉ် Fixed န်
ယခုငါတို့တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာန့်ကရှင်းပြသည်ကြနှင့်မည်သို့သူတို့တွက်ချက်နေကြတယ်, ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ကြော်ငြာ fixed န့်နှင့်အတူစံစျေးကွက်ထုတ်လုပ်သူပွဲစားအကြားအရေးပါသောခြားနားချက်အလေးပေးရန်အရေးကြီးပါသည်ဖြစ်တယ်, ဘယ်လိုတစ် ECN - STP ပွဲစား (ထိုကဲ့သို့သော FXCC ကဲ့သို့) လည်ပတ် access ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့နေတုန်း စစ်မှန်တဲ့စျေးကွက်န့်ရန်။ အဘယ်သို့တစ်ခု ECN operating တစ်ပွဲစား - STP မော်ဒယ်သူတို့ကိုယ်သူတို့ပညာရှင်များထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့သူကုန်သည်များအဘို့အညာဘက်ကိုရှေးခယျြမှု (ပွဲတစ်ပွဲကိုသာရှေးခယျြမှု) ဖြစ်ပါသည်။
အတော်များများကရိုးရာစျေးကွက်ထုတ်လုပ်သူ Forex ပွဲစားများသူတို့ကုန်သည်များ Forex တစ်ခုအားသာချက်အဖြစ်, သူတို့ရဲ့ "အနိမ့်, fixed, Forex န်" သတ်မှတ်ချက်များကိုအဘယျသို့ advertise ပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်လက်တွေ့တွင်မူ (ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်အားဖြင့်) စျေးကွက်ချမှတ်သူများမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အမြတ်အစွန်းအကြိုးခံစားနိုင်ရန်အတွက်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်စျေးကွက်နှင့်ကဏ္ဍအတွင်းစျေးကွက်စေပေးထား, fixed န်သိသိသာသာအားသာချက်မပူဇော်နိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျနှင့်များစွာသောသာဓကထဲမှာအထင်အမြင်မှားစေပါလိမ့်မယ်။
Market ကထုတ်လုပ်သူထိုကဲ့သို့သောပျံ့နှံ့ခွံ့ပြုသည်နည်းဗျူဟာ employ မည် တစ်နည်းဗျူဟာမထွက်ရ ဆက်ဆံစာသင်ခုံနှင့်အတူ Forex ပွဲစားများ client ကိုအရောင်းအအကျိုးဆောင်ဆန့်ကျင်ရွှေ့တဲ့အခါသူတို့ရဲ့ဖောက်သည်ကမ်းလှမ်းမှုအပေါ်ပျံ့နှံ့ manipulate ။ အဆိုပါကုန်သည်သို့သော်ကြောင်းပြန့်ပွားသုံး pips ကွာစစ်မှန်တဲ့စျေးကွက်စျေးနှုန်းအနေဖြင့်ဖြစ်စေခြင်းငှါ, ထို့ကြောင့် paid အမှန်တကယ်ပြန့်ပွား (အဖြစ်မှန်အတွက်) လေး pips ဖြစ်ပါသည်, သူတို့တစ်တွေပုံသေတစျခု PIP ပြန့်ပွားစေခြင်းငှါရိပ်မိသောအရာကိုမှာကုန်သွယ်မှုနေရာဖြစ်နိုင်သည်။ ဖြောင့်ကုန်သည်ရဲ့အမိန့်ဟာ ECN သင်တန်းသားများအားဖြင့်ကိုက်ညီသည်အဘယ်မှာရှိအပြောင်းအလဲနဲ့မော်ဒယ်မှတဆင့်အနေနဲ့ ECN ဤနှိုင်းယှဉ်, အဲဒါကိုတစ်ဦး ECN ပတ်ဝန်းကျင်မှတစ်ဆင့်အရောင်းအနေရာ, ပညာရှင်များထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်လိုသူလက်လီကုန်သည်များ, အဘို့ဖြစ်၏ဘယ်လိုမရှိမဖြစ်သိသာဖြစ်လာသည်။
FXCC ၏ ECN / STP ကုန်သွယ်ရေးပုံစံသည်ဘယ်တော့မှပုံသေပြန့်ပွားမှုများကိုပြသခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ပုံစံသည်မဲဆန္ဒရှင်များမှငွေလွယ်ကူစွာစုစည်းထားသောလေလံဆွဲခြင်း၊ အဓိက ဦး ဆောင် FX ငွေဖြစ်လွယ်ပံ့ပိုးပေး။ ထို့ကြောင့်ကမ်းလှမ်းမှုများပြန့်ပွားခြင်းသည်အမြဲတမ်းတိကျစွာငွေကြေးစုံတွဲတစ်တွဲအတွက် ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်း ၀ ယ်ခြင်းနှုန်းကိုတိတိကျကျထင်ဟပ်စေပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများဖြစ်ကြောင်းသေချာစေသည် ကုန်သွယ် Forex စစ်မှန်သောထောက်ပံ့ရေးနှင့်ဝယ်လိုအား parameters များကိုအစစ်အမှန် Forex စျေးကွက်အခြေအနေများအောက်တွင်။
စျေးကွက်အခြေအနေများအကောင်းဆုံးဖြစ်ကြပြီးမိုးသည်းထန်စွာထောက်ပံ့ရေးနှင့်ဝယ်လိုအားလည်းမရှိသည့်အခါတစ်ဦးက fixed ပျံ့နှံ့ကောင်းတစ်ဦးအရာကဲ့သို့ထင်ရပေမည်။ အမှန်မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ပြန့်ပွားစျေးကွက်အခြေအနေများအကောင်းဆုံးနဲ့မသက်ဆိုင်မဆိုဘို့စစ်မှန်တဲ့ဝယ်ရောင်းချခြင်းနှုန်းထားများပေးထားအရာကိုမဟုတ်လျှင်ပင်အရပ်ဌာန၌တည်သည် ငွေကြေးတစ်စုံ ဖြစ်ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ECN / STP မော်ဒယ်အခြား Forex ဈေးကွက်ပါဝင်သူ (လက်လီနှင့်အဖွဲ့အစည်း) တိုက်ရိုက် access ကိုအတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များပေးပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်တောင်မှသူတို့တဘက်၌ရောင်းဝယ်ဖောက်ပါဘူး။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များစားပွဲပေါ်မှာစျေးကွက်ထုတ်လုပ်သူဆက်ဆံကျော်ပိုပြီးအားသာချက်ပေးအပ်:
ပိုကောင်း Forex နှုန်းထားများ
FXCC နှင့်၎င်း၏ client များအကြားအကျိုးစီးပွားပဋိပက္ခမှမရှိပါ
FXCC က၎င်း၏ client များဈေးကွက်ထဲမှာအများဆုံးယှဉ်ပြိုင်မှုနှုန်းနှင့်အန့်ကမ်းလှမ်းရန်ကြိုးပမ်း။ ဒါကကျနော်တို့ယုံကြည်စိတ်ချရသောငွေဖြစ်လွယ်ပေးသူနှင့်အတူဆက်ဆံရေးထူထောင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသောအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များရှိသည်အားသာချက်ကိုသူတို့အကြီးဆုံးဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများကဲ့သို့တူညီသောဝေါဟာရများအပေါ် Forex နယ်ပယ်တွင်အလုံးအရင်းဝင်သောသူဖြစ်ပါတယ်။
စျေးနှုန်းများထို့နောက်အကောင်းဆုံး BID ကိုရွေးချယ်ပေးသော FXCC ရဲ့ပေါင်းစည်းခြင်း Engine ကိုမှအမျိုးမျိုးသောငွေဖြစ်လွယ်ပေးသူထံမှထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်လွှစျေးနှုန်းများအနေဖြင့်စျေးနှုန်းများကိုမေးနှင့်ရွေးချယ်ထားအကောင်းဆုံး BID ကိုရေးသားနေကြသည် / အောက်ကစီးဆင်းပုံအတွက်ရုပ်ပြအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်စျေးနှုန်းများအမေး။